HomeAfricaMorocco Oo Laga Mamnuucay Labada Koob Afrika Ee Soo Socda
Morocco ayaa xayiraad laga saaray labada koob ee qaramada qaarada Afrika ee soo socda kadib markii ay ku guul daraysatay ama diiday inay marti galliso koobka Afrika ee sanadkan.
Xidhiidhka kubada cagta qaarada Afrika ee (Caf) waxay sidoo kale ku xumukeen Morocco ganaax lacageed oo dhan $1m (1 Milyan oo Dollar ka Maraykanka ah) iyo sidoo kale inay bixiso 8m Euro (£5.9m) oo ah khasaarihii ay sababtay diidmadoodu.
Morocco ayaa ka gaabisay inay muddaddii kama dambeysta ahayd ku soo gudbiso go’aanka ahaa inay koobka Marti gelinayso iyo inaanay marti gelinayn.
Waxay wadankaasi ku sababeeyeen diidmadooda cabsida fiditaanka cudurka sida weyn u baahiyey ee Ebola virus.
Equatorial Guinea ayaa bedelkeeda loo magacaabay wadanka marti gallinaya koobka qaramada qaarada Afrika ee sanadkan oo ah dhacdo ama horyaal ay ku loolamaan 16 wadan, halka Morocco – oo hore ugu soo baxday – CAf ay ka reebeen xulkoodii qaranka .
Morocco ayaa dalbanaysay in tartanka dib loo dhigo ilaa sanadkan 2016, laakiin dalabkeedaas ay ka diideen xidhiidhka Afrika.
Tartanka oo wakhti xaadirkan ka socda wadankii lagu bedelay Morocco ee Equatorial Guinea , waxaana ciyaarta ugu dambeysa ee Finlaka maalinta Axada ah wada ciyaari Doonaa xulalka Ghana iyo Ivory Coast.